DF Oo Lagu Dhiliilay Ugurmadka Qaxootiga Ku Sugan Bosaso+COD. – SBC
DF Oo Lagu Dhiliilay Ugurmadka Qaxootiga Ku Sugan Bosaso+COD.
iyadoo ay mal mahan magalada Bosaso Ay ku sugnayeen xubno ka tirsan golaha wakiilada Ee Dowlada Puntland Ayaa Maanta kormer ku tagay xerada dadka qaxotiga ah ee ka soo Barakacay dagaaladda dalka yemen.
Xubnahan ka tirsan Barlamanka Puntland ayaa socdaal ku dhex maray qaybaha ay ka koban tahay xerada barakacyasha ee Bosaso Halkaasi oo ay ku noolyihiin qaxoti isugu jira somali iyo ajaanib.
Xilibaan Cabdicasiis Siciid Gacmay oo ka mida barlamanka puntland ahna gudomiyaha gudiga losoo diray Gobolka bari ayaa dowlada federalka somaliya Ku Dhalilay ineysa Waxba la Qaban Maamuladda dalka oo ay sheegto iney iyaddu hoostagaan, Sida Uu Sheegay.
Dowladda Puntland ayuunna sheegay in Ay Door weyn ka qaadatay U Gurmadka Walaalaha somaliyeed ee ka soo Barakacay Colaadaha dalka Yemen, Wuxuunna ugu danbeyn Baaq uwada diray hay’adaha samafalka iyo Qurbajoogta reer Puntland Kuwaas oo uu sheegay in loo midoobo U gurmadka dadkaasi.
Hadalka Xildhibaan Cabdicasiis Gacmeey Ayaa ku soo Aadaya iyadoo Shacabka iyo Dowladda Puntland Ay Uwada istaageen Caawinta Dadka Qaxootiga ah ee ka imaanaya dalka yemen kuwaas oo isgu jirra somaliya iyo ajaanib.
Waxaanna xildhibaanku uu qeyb ka yahay Gudiyo kala duwan oo xildhibaanno ah kuwaas oo ukuurgalaya Xaaladda Rasmiga ah ee Ay Ku Suganyahiin shacabka reer Puntlad.